Soo Degso Boeing 727-200 Advanced FSX & P3D - Rikoooo
downloads 54 488
Qore: Thomas Ruth, cusbooneysiiya BK
Updated on 06 / 03 / 2018: Added GPWS, Panel.cfg waxaa laga beddelay Jarmalka ilaa Ingiriisi, cayil yaryar oo yaryar, ku daray 727 Performance, Nidaamka iyo xaddidaadaha PDF ee faylka dokumentiga.
Updated on 04 / 09 / 2017: Hadda waa iswaafaqay Prepar3D v4, Auto-installer version 10, isbedellada duulimaadka duulimaadka, xaqiiqooyin macquul ah, isticmaalka shidaalka oo macquul ah, ku dar dhawaaqyada caadooyinka, radar cimilada adag.
Boeing 727-200 (Pax iyo Freighter) nooca horumarsan ee waddaniga ah ee loogu talagalay FSX SP2 iyo Dardar gelinta. Waxay la timid guddi '2D' iyo 'cockpit foju' ah oo lagu daray hal FMC oo shaqeynaya! Waxay kujirtaa laba dayactir: Pacific Air Express eflp ADVA RSBK (INS) iyo HAPAG (FMC). isugeynta badan la jaan qaada isbadal ahaan. Sidookale waxaa kujira casriyeyn badan. Read buuga.
Boeing 727 waxay ahayd wakhti aad u dheer, dunida oo dhan ugu caansan diyaaradaha ee. 727 ayaa u duulay markii ugu horeysay ee 1963.
design ee 727 ahaa natiijada tanaasul u dhexeeya United Airlines, American Airlines iyo Eastern Airlines on qaabeynta of bedelka ay u 707 Boeing. United Airlines doonayay afar ah duulimaad ay garoomada diyaaradaha ee sarreeya sare, Airport International Stapleton gaar ahaan ay xarumaha. American Airlines doonayay diyaarad mataanaha-engine sababo hufnaan ah. Eastern Airlines ayaa rajeynayay for engine saddexaad duulimaadyada ay Caribbean. Ugu dambeyntii, saddexda diyaaradaha heshiiyeen trijet ah. Sayidka ayaa ku dhashay 727 ah.